दुई खेल, ६ टोलीको भविष्य ! | Hamro Khelkud
दुई खेल, ६ टोलीको भविष्य !
आइतबार, वैशाख २२, २०७६
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा आज लिग चरणका अन्तिम दुई खेल हुँदै छन् । यी दुई खेलको नतिजाले ६ टोलीको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्स र किंग्स इलाभेन पन्जाबले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । खेल नेपाली समय अनुसार पन्जाबको घरेलु मैदान मोहालीमा ४ : १५ देखी सुरु हुनेछ । चेन्नई सुपर किंग्स आजको खेलमा विजयी भए क्वालिफायरमा पुग्ने छ । पराजित भएपनि चेन्नई क्वालिफायरमा स्थान बनाउन सक्ने उच्च संभावना छ ।
चेन्नईले जारी आईपीएलमा १३ खेलमा ९ मा जित र ४ मा हारका साथ शीर्ष स्थानमा छ । १३ खेलमा ५ मा जित र ८ मा हारका साथ पुछारमा रहेको पन्जाब आजको खेलमा फराकिलो अन्तरले विजयी भए र अर्को खेलमा कोलकता मुम्बईसँग फराकिललो अन्तरले पराजित भएको अवस्थामा प्ले अफको झिनो अंक गणीतिय संभावना रहन्छ । यद्यपी कोलकता र हैदरावादको भन्दा पन्जाबको सम्भावना निकै कम छ ।
त्यस्तै आजको दोस्रो खेलमा मुम्बई इन्डियन्स र कोलकता नाइट राइडर्सबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । खेल बेलुका ८ : १५ देखी मुम्बईको घरेलु मैदान वानखडेमा हुने छ । मुम्बई विजयी हुँदा सन्दीपको टिम दिल्ली क्यापिटल्सलाई धक्का लाग्ने छ ।
मुम्बई विजयी भए सोझै क्यालिफायर प्रवेश गर्ने छ । त्यस्तै कोलकताको लागि यो खेल निर्णायक हुने छ । विजयी भए स्वत: प्ले अफमा पुग्ने छ । पराजित भए नेट रन रेटमा निर्भर रहने छ । नेट रन रेट हैदरावादको भन्दा कमजोर हुँदा पराजित भएको खण्डमा अघिल्लो चरणको संभावना कम देखिन्छ । कोलकताले हार्दा हैदरावादको भाग्य चम्किने निश्चित छ । मुम्बई १३ खेलमा ८ मा जित र ५ मा हारका साथ तेस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै कोलकता १३ खेलमा ६ मा जित र ७ मा हारका साथ पाँचौ स्थानमा छ ।
आज मुम्बई,चेन्नई र दिल्ली मध्य दुई टोलीको क्यावालिफायरको निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तै हैदरावाद, पन्जाव र कोलकता मध्य एक टोली प्ले अफमा पुग्दा २ टोली लिग चरणबाट बाहिरिने छन् । बेंगलोर र राजस्थान समुह चरणबाटै बाहिरि सकेका छन् ।